नेपाल आज | प्रचण्डको परिवारमा ‘सुरक्षा थ्रेट’ सिर्जना गर्ने संदीग्ध अंगद सिंहको दोहोरो नागरिकता
समाज कभर स्टोरी
बुधबार, १४ भदौ २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
काठमाडौं । ललितपुरमा स्टेपिङ स्टोन प्रि स्कुल सञ्चालन गरिरहेका अंगद सिंह नामक एक संदीग्ध भारतीयले झुठो विवरण देखाएर काठमाडौं जिल्लाबाट वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको खुलासा भएको छ । नेपाल आजले अंगद सिंह नामका यी व्यक्ति जसको राष्ट्रियता नै विवादमा परेको छ, उनको बारेमा शंकास्पद क्रियाकलाप प्रकाशन गर्न थालेपछि थप विषयका प्रमाणहरु प्राप्त हुन थालेको छ । अंगदका हजुरबुवा प्रितम सिंह अहिले पनि भारतीय नागरिक नै हुन् । तर उनी वर्षौदेखि नेपालमा व्यवासाय गरेर बस्दै आएका छन् । वर्षौैं नेपालमा बस्दा पनि प्रितमले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न सकेनन् । तर उनका नाति कुलमै नभएको विवादास्पद निस्किए । किनभने उनले नेपाली प्रशासनको कमजोरीको उपयोग गर्दै भारतको नागरिकता त्यागेर नेपालबाट वंशजका आधारमा नागरिकता फुत्काएका छन् । जबकी भारतको नागरिकता त्यागेको मान्छे नेपालमा वंशज हुन सक्दैन । सन् २००१ मा भारतीय दूतावासले उनलाई भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गरेको थियो । अंगदको भनाइ अनुशार उनले भारतको नागरिकता पनि लिए । आमा भारतीय भएका कारण उनले भारतको नागरिकता लिए । जब उनलाई नेपालको नागरिकता आवश्यक पर्यो उनले भारतको नागरिकता ८ वर्ष अगाडि त्यागेर बाबुको नामबाट नेपालमा नागरिकता लिए । उनको हजुरबुबा भारतीय नै हुन अहिले पनि । बाबुले भने नेपाली नागरिकता लिएका छन् । हजुरबुवा भारतीय भएपछि उसको छोरा वंशज हुँदैन । त्यसमाथि नातिले भारतको नागरिकता लिइसकेका छ भने ऊसले भारतको नागरिकता त्यागेपछि वंशज हुने सम्भावना झनै हुँदैन ।
अंगदले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ६७ साल साउन २५ मा नेपाली नागरिकता उम्काएका रहेछन् । त्यो पनि वंशजका आधारमा । उनको नागरिकतामा प्रशासकीय अधिकृत सागरमणि पाठकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।भारतको नागरिकता त्यागेको मान्छेले कसरी नेपालमा वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँछ ? भन्ने सवालमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा भन्छन्, ‘भारतको नागरिकता भए नभएको सबै लुकाएर, बाबुको नागरिकताका आधारमा मात्रै विवरण पेश गरेर वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको हुन सक्छ । विवरण लुकाएको प्रमाणसहित उजुरी पर्यो भने उनका नागरिकता बदर गरिदिन्छौं ।’विवादास्पद अंगदको मात्रै होइन, अब नागरिकता त उनको आमाको पनि छानविन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनले आमाको नामबाट ८ वर्ष भन्दा अगाडि भारतीय नागरिकता लिएको नेपालआजसँगको कुराकानीमा स्पष्ट पारेका छन् । सामान्यतः भारतबाट नेपालमा बिहे गरेर आएपछि भारतीय महिलाहरुले नेपालको नागरिकता लिन्छन् । अंगदले आमाको नामबाट भारतको नागरिकता लिएको बताएका छन् । अब उनकी आमा कमल सिंहको पनि नागरिकता छानविनमा पनेै देखिन्छ । किनभने उनी नेपालको नागरिक हुन कि हैनन् ? हुन् भने त अंगद फस्ने सम्भावना अझै छ । हैनन् भने पनि उनको नागरिकता विवादको घेरामा परिसकेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका नाति आफ्नो स्कुलमा पढ्ने भन्दै अंगदले शुल्क महंगो भएको आफ्नो विद्यालयको ब्राण्ड स्थापना गर्न लागिपरेका छन् । दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो विद्यालयलाई पत्याएको भन्दै उनले प्रचण्डका कान्छी बुहारीतर्फका नाति प्रणव दाहाललाई मोडलको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । विद्यालयको कक्षा कोठामा खेल्दै गरेका प्रणवको फोटो उनले सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेका थिए जुन दिन प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गर्दै देशको कार्यकारीसम्म बनेका परिवारको सदस्यको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई रत्तिभर हेक्का नराखी उनले फगत विद्यालयको प्रचार हेरेको देखिन्छ । निजी विद्यालयको विरुद्धमा बमबारुद बर्षा गरेका प्रचण्ड स्वंयले नातिलाई पन्ध्र महिना हुँदा देखि मन्टेश्वरीमा राखेको विषय सार्वजनिक भएपछि यसले माओवादीवृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ ।
प्रणवका बुबा प्रकाश दाहालले अंगदले झूठा प्रचार गरेर आफूहरुलाई बदनाम गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफ्ना नाति केही महिनायता आमा बिना मगरसँगै काठमाडौँ बाहिर रहेको दाहालको दाबी छ । उनले आफ्नो कान्छो छोरा अंगदले संचालन गरेको विद्यालयमा भर्ना नभएको दाबी गरेका छन् । अहिले पनि स्टेपिङ स्टोन नामक उनको स्कुलका कर्मचारीले प्रचण्डका नाति सोही विद्यालयमा पढ्ने गरेको बताउँछन् । यसमा अंगद आफै पनि प्रोत्साहन गर्छन ।
► ‘विवाह गरेको छ महिनामा सन्तान जन्माएका थिए अंगदले’ भन्नेलाई जेल
► संदिग्ध भारतीय नागरिक अंगद सिंहसँग सिडिओकै साँठगाँठ
► रिस फेर्न नेताको पावर र प्रहरी संगठनको दुरुपयोग गरेर कोचियो जेल
► प्रकाश दाहाल भन्छन्, 'मलार्इ बाेर्डिङ सञ्चालकले झुक्यायाे'
► कीर्ते नागरिकताधारी अंगद सिंहविरुद्ध उजुरी, उजुरी दर्ता गर्न सिडिओ अफिसमा आनाकानी
► प्रचण्ड र गगन थापाको आडमा कसरी एक निर्दोषलाई दुःख दिइयो नेपालमा ? यो पढौं (भिडियोसहित)
► यस्ता छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डका नयाँ नाति प्रणव दाहाल (फोटो फिचर)
रानीपोखोरी आउँदो भाइटीकासम्ममा तयार हुने
गुठी विधेयकविरुद्ध बन्द आह्वान